ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: အတိုတကာ့ အတိုဆုံးမေတ္တာစာ
ကျွန်တော်မိန်းမရစ .. ၊ အဘိုးအဘွားများရွာသို့ ရောက်ခဲ့၏။
“လူလေး၊ အခု မင်းဘာလုပ်သလဲ”
“ကျွန်တော် ပန်းချီဆွဲတယ် အမေကြီး”
“လူလေး .. မင်း အိမ်ထောင်လည်းကျနေပြီ၊ ကိုယ်ဝါသနာပါရာချည်းပဲ လုပ်မနေနဲ့၊ အလုပ်လေးဘာလေး လုပ်ပါဦး”
အမေကြီး (အဘွား)သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စာနည်းနည်းသာ သင်ဖူး၏။ ခေတ်ပညာ မတတ်ပေ။
တစ်နေ့က ရွာမှလူကြုံနှင့် ဆန်တစ်တင်း အမေကြီးပို့လိုက်သည်။ ပဲတီပင်ပေါက် လက်ရေးနှင့် အမေကြီး၏ စာတစ်စောင်ကိုလည်း ကျွန်တော်ဖတ်ရ၏။
အမေဂျီးစဂါးကို နားမထောင်ဘဲ ဗဂျီဘဲ ရေးနေသီ၊
(၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ မေလ၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း)
"အစားထိုးမရသော မြန်မာ ပန်းချီကျော် ဝသုန် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ ………"
A Sketch of WaThone 1
A Sketch of WaThone 2
သူ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားသော မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ အခြေစိုက် National Geographic အဖွဲ့မှ အောက်တိုဘာလ (၃) နေ့တွင် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သော (၅) ကြိမ်မြောက် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ဒုတိယအကြိမ် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သော A Sketch of Wathone သည် ပန်းချီ ဝသုန်၏ အနုပညာ၊ သူ့ဘဝ နှင့် မိသားစု အကြောင်းကို ရိုက်ကူးခဲ့သော ဆရာဝသုန့် အကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
"A Sketch of Wathone" profiles Wathone, one of Myanmar's best known painters, as he shares his thoughts on life, art and family. The film is Kyi Phyu Shin's second documentary completed through the Yangon Film School. "A Sketch of Wathone" made its U.S. debut at All Roads in Los Angeles and Washington and will also be screened in Santa Fe.
ကျွန်တော်က ဆရာဝသုန်ရဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကို သဘောကျလို့ ဝေမျှတာပါ။သူ့အကြောင်း အသေးစိတ်ကို အနုပညာသက်သေဘလောခ်မှာ လေ့လာနိုင်ပါသည်။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 7:14 AM
တံဆိပ်များ မိတ္ထူ , ရုပ်ရှင်
လင်းကြယ်ဖြူ December 19, 2009 at 8:14 AM
တိုတိုလေးနဲ့ ကို ကောင်းတဲ့
အဓိပ္ပါယ် အများရှိတဲ့ စာစုလေးပါပဲ..
အနုပညာမြတ်နိုးသူတစ်ဦးရဲ့ ဘ၀နဲ့..အဲ့ဒီ့ အနုပညာကို ဖက်တွယ်ထားတတ်တဲ့ အနေအထားလေး
ညလင်းအိမ် December 19, 2009 at 11:01 AM
အနုပညာသည်တယောက်ရဲ့ ဘ၀နဲ့ အကြောင်းပေါ့နော်...
ဆရာ ၀သုန် ကောင်းရာသုကတိ လားပါစေဗျာ...
khun December 19, 2009 at 11:25 AM
~ဏီလင်းညို~ December 19, 2009 at 3:19 PM
ဆရာ့ရဲ့ အကြောင်းကိုကြည့်ရတာ... တစ်ကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသားလေးပဲနေခဲ့တာနော်...။ ဘာအဆောင်အယောင် မာယာတွေမှမပါဘူး...။ နှလုံးသားလိပ်ပြာလှပါစေဆိုတဲ့ ပုံလေးနဲ့စကားသံလေးကိုကြားမိခဲ့ရတာ ကျေနပ်မိတယ်ဗျာ...။
တစ်ကယ့်ကို တစ်ခါမှမကြည့်ဖူးခဲ့တာကို ကြည့်ရလို့ ကျေးဇူး အရမ်းတင်တယ်ဗျာ...။
မောင်သီဟ December 19, 2009 at 9:04 PM
ရေတမာ December 19, 2009 at 9:40 PM
မြတ်မွန် December 20, 2009 at 2:43 AM
ဆရာကြီး ကောင်းရာ သူကတိ လားပါစေ..။
ဇောင်း December 20, 2009 at 3:47 AM
အနုပညာသည် တစ်ယောက်က မိမိဝါသနာပါရာကို တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်တဲ့ အကျင့်က အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတို့ရဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါပဲဗျာ..
အဘွားအိုရဲ့ စာတစ်စုနဲ့ က မှတ်သားစရာတစ်ခုပါ
စိတ်၏ဖြေရာ December 20, 2009 at 7:08 AM
မန်းလေရူး December 20, 2009 at 7:12 AM
ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး ။ ကြည့်ပြီးတော့ တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲ ...
"စိတ်မပါပဲ ထမင်းစားဖို့ အလုပ်လုပ်နေလူတွေ " .. :)
အတွေးအသစ် တစ်ခု စဉ်းစားဖို့ အသစ်တိုးပါတယ်
မိုးစက်အိမ် December 20, 2009 at 4:07 PM
ထတ္ထူကတိုတိုလေးရယ် ဒါပေမဲ့အတွေးအားကို
တော့တော်တော်လေး ကျယ်ပြန့် သွားစေတယ်ဗျာ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့. . .
Cameron December 21, 2009 at 5:54 AM
ဆရာဝသုန်ရဲ့ ခံစားချက်အစစ်ကလေးကို ထပ်တူလာခံစားသွားပါတယ်...။ ကျေးဇူးပဲကိုချမ်း..။ ဒါမျိုးဘ၀ကိုနက်နက်နဲနဲဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ စာများများတင်ပေးဦးနော်...
desertraindrops December 24, 2009 at 1:55 AM
သိပ်ကောင်းတဲ့စာစုလေးပါ။ ဒီတခါပဲ ကြည့်ဖူးသေးတယ်။ ကျေးဇူးပဲ ကိုချမ်းရေ.